Energizer Power Max P8100S: ခေါက်နိုင်သောဖုန်း MWC 2019 | Androidsis
Energizer သည် MWC 2019 တွင်အလွန်စျေးပေါသောဖုန်းဖြင့်အံ့အားသင့်သည်
Mobile World Congress 2019 ၏ဤစာစောင်သည်အထူးသဖြင့်ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်နေကြောင်းမည်သူမျှမငြင်းနိုင်သော်လည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်ရှိသောဖုန်းများသည်နောက်ဆုံးတွင်ဈေးကွက်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည်။ ဒါဟာ Samsung နှင့်အတူဖြစ်ခဲ့သည် Samsung ရဲ့ Galaxy ခေါက် နှင့် Huawei တို့ဖြစ်သည် Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက်က X, အလုပ်လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်ကိုတင်ဆက်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးကြီးမားသောအမှတ်တံဆိပ်။ ထိုအထွက်ကြည့်ပါ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်သောခေါက်နိုင်သောဖုန်းကို Energizer သည်ပါတီနှင့်ပူးပေါင်းမည်။
သတိထားပါ၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် CES 2019 တွင်ပြသခဲ့သည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Flexpay ကဲ့သို့သောအသုံးမ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထင်ရှားသောနည်းပညာပြပွဲတွင်နာကျင်မှုမရှိဘဲကျော်ကြားသွားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ထဲသို့မကြာမီရောက်ရှိပြီးစျေးနှုန်းသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောအမှန်တကယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဖုန်းအကြောင်းပြောနေသည်။ ဈေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်အတွက်ယူရို ၈၉၉။ ဈေးနှုန်းချိုသာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။ သူတို့ကဒီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်ဖုန်းကိုစျေးပေါစျေးနှုန်းအောင်နိုင်စေရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အနည်းငယ်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ Energizer Power Max P8100S သည်စျေးသိပ်ပေါသောခေါက်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်
San Luis အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နံပါတ်များကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည် MWC 26 အတွက်လက်ကိုင်ဖုန်း ၂၆ လုံး။ ထို့အပြင်သူသည်စကားလုံးများကိုထိန်းသိမ်းထားရုံသာမကဘဲအရှုပ်တော်ပုံများနှင့်ဖုံးနေသောဖုန်းတစ်လုံးကိုပြသခြင်းဖြင့်သူအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ မင်းနာမည်? စွမ်းအင်ပါဝါမက်စ် P8100S။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကိုလူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်သူကမတူညီတဲ့မော်ဒယ်လ် ၂ မျိုး၊ ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့လူအများကြားမှာ ၀ ယ်နိုင်တဲ့ကိရိယာအပြင်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများရှိမည့်ဗီတာမင်များပိုမိုသောဗားရှင်းကိုပြင်ဆင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးကိုဆက်မလုပ်ခင်သင်လိုချင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ် ဒီစျေးပေါသောခေါက်ဖုန်းကိုဝယ်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို၎င်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုစျေးကွက်တွင်စတင်ရန်အဆိုပြုသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သော ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာအထိစောင့်ရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ပြusနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုသိသော်လည်းသူတို့ကအသုံးပြုမည့်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားကိုမဖော်ပြလိုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင် double screen စနစ်ရှိသည် Full HD + resolution, အပြည့်အဝတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ 8.1 လက်မနှင့်ထောင့်ကနေခေါက်သည့်အခါ6လက်မ၏ထောင့်ဖြတ်နှင့်အတူ။ ၎င်းအတွက် MediaTek Helio P70 ပရိုဆက်ဆာကို 8 GB RAM နှင့် 256 GB အထိရရှိနိုင်သော Internal Storage နှင့်အခြား microSD Card Slot မှတစ်ဆင့်နောက်ထပ် 256 GB ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုပြောရန် စွမ်းအင်ပါဝါမက်စ် P8100S ၎င်းတွင် dual-camera စနစ်ပါဝင်ပြီးပထမ ၄၈ megapixel မှန်ဘီလူးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Sony မှလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒုတိယ 48 megapixel အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောပုံ၏အနက်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည် bokeh သို့မဟုတ် defocused ။ Selfie ချစ်သူ? ကောင်းပြီ၊ ၎င်း၏ ၂၄ megapixel ရှေ့ကင်မရာသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထက်ပိုပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သူ့ကိုမေ့လျော့လို့မရပါဘူး 10.000 mAh ဘက်ထရီမြန်သောအားသွင်းစနစ်ဖြင့်ဤ Energizer ခေါက်ဖုန်း၏အလေးချိန်ကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ရန်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ပိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်သိသိသာသာကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းရဲ့အလေးချိန်ဟာ Samsung Galaxy Fold ဒါမှမဟုတ် Huawei Mate X တို့ထက်ပိုကြီးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောပါ Energizer မှဤခေါက်နိုင်သောဖုန်းသည်လာလိမ့်မည် 5G ဆက်သွယ်မှုဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းဟာကဏ္theမှာပြိုင်ဘက်တွေနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူး။ ဤဗားရှင်းအပြင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီသည် Qualcomm ၏သရဖူဖြစ်သော Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာတွင်ရတနာကိုတပ်ဆင်မည့်ပိုမို Vitaminized မော်ဒယ်ကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ စျေးနှုန်းမှာအထူးစျေးကြီးပြီးယူရို ၁,၉၉၉ ကုန်ကျမည်။ ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ဖြေရှင်းချက်များ၏ Huawei y Samsung ယူရို ၂၀၀၀ ၀ န်းကျင်သာကွာခြားမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Energizer သည် MWC 2019 တွင်အလွန်စျေးပေါသောဖုန်းဖြင့်အံ့အားသင့်သည်
Sony ၏ 5G စမတ်ဖုန်းရှေ့ပြေးပုံစံကို MWC 2019 တွင်ပြသခဲ့သည်